नायिका वर्षा राउतलाई पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि, आँफुलाई कोरोना लागेपछि दिइन् यस्तो सन्देश – Sapana Sanjal
May 9, 2021 249
नायिका वर्षा राउतलाई पनि कोरोना देखिएको छ । उनले आफुलाई कोरोना लागेको कुरा सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएकी हुन् । आफ्नो गन्ध हराएर चेक गर्दा कोरोना देखिएको उनले बताएकी छन् ।
यो पनि ,बिपी प्रतिष्ठानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बिरामीको चाप बढेर गएको छ । आज बिहानको तथ्याङ्कअनुसार बिपी प्रतिष्ठानमा ११४ बिरामी भर्ना भएका छन् । यो तथ्याङ्क यही वैशाख १ गते यताको हो ।
मारवाडी सेवा समिति र नेपाल अग्रवालको सहकार्यमा कुरुवा घर निर्माण गरिएको हो । अस्थायी बिरामी कुरुवा घर १८ फिट चौडाइ र ८० फिट लम्बाइको हल, शौचालय तथा स्नान कोठासहितको सुविधा सम्पन्न रहने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
Prevसोमबार प्रधानमन्त्री ओलीवाट राजिनामा, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशकै मोडलको प्रयोग !
Next.त्यसपछि यी युवती युवकको घरमा पुगेकी थिईन….!